Heshiish cusub oo dhex dhexmaray Immaraadka iyo Puntland & Shirkada DP World+Sawirro. – Xeernews24
Heshiish cusub oo dhex dhexmaray Immaraadka iyo Puntland & Shirkada DP World+Sawirro.
15. April 2019 /in WARAR/NEWS /von admin
Madaxweynaha Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni ayaa kulan la qaatay madaxda shirkadda DP-World oo uu hogaaminayey maamulaha shirkada Sultan Ahmed Bin Sulayem.
Madaxweynaha ayaa waxaa kulanka ku wehelinaayey Wasiirka Wasaaradda Dekedaha iyo Gaadiidka Badda Maxamed Cabdi Cismaan (Majiino), Wasiirka Wasaaradda Ganacsiga, Wershedaha iyo Maalgashiga Cabdullaahi Cabdi Xirsi, Wasiirka Wasaardda Duulista Hawada iyo Garoomada Xuseen Cismaan Lugatoor (Gabiley) iyo saraakiil ka tirsan Madaxtooyada Dowladda Puntland.
Kulankan ayaa waxaa looga wada hadlay dhismaha iyo balaadhinta dekedda magaalada Boosaaso, dar-dargelinta hawlaha shaqo ee dekedda iyo ka midha dhallinta heshiiska caalamiga ah ee bud-dhigga u ah mashruucani muhiim ka ah.
Madaxweyne Deni oo ay ka go’antahay horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha Dowladda Puntland iyo dar-dargelinta arrimaha maalgashiga ayaa balanqaaday in Xukuumadda cusub ee Puntland samayndoonto jewi sahlaya in deegaanada Puntland u diyaarsanaadaan maalgashi caalami ah, kuwaasi oo taageeraya sugidda Amniga iyo horumarinta deegaanada Puntland.
Shirkadda DP-World ayaa balanqaaday in ay dedejindoonto dhammaan hawla la xidhiidha dhismaha iyo balaadhinta dekedda Boosaaso, isla’markaana ay ilaalinayaan hishiisyada iyo wax-walboo ku saabsan mashruucaas balaadhan ee lagu horumarinaayo xidhiidhka ganacsi, wada-dhalasho, siyaasadeed iyo kan soo jireenka ah ee Puntland iyo Imaaraadka.
Dhinaca kale Wasiirka Wasaaradda Dekedaha iyo Gaadiidka Badda Puntland Maxamed Cabdi Cismaan (Majiino) ayaa kulankan kadib la qaatay kulamo muhiima masuuliyiinta kale ee Shirkadda DP-World, kuwaasi oo salka kuhaya dar-dargelinta dhammaystirka mashruuca dhismaha iyo balaadhinta dekedda magaalada Boosaaso.
Ugu dambeyn, Madaxweynaha Dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni oo ay ka go’antahay horumarinta, qaabaynta, maalgelinta iyo sugidda amniga Puntland ayaa kulamo kale oo muhiima la qaatay Wasaaradda Ganacsiga dalka Imaaraadka, iyadoo mar-labaad laga wadahadlay dib u yagleelidda ganacsiga xoolaha nool, waxaana si buuxda la isula meeldhigay in sida ugu dhakhsiyaha badan dib loogu bilaabo dhoofka xoolaha, waxaana uu kulankaasi kusoo dhammaaday guul.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/04/1-4.jpg 664 960 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-04-15 19:54:592019-04-15 19:54:59Heshiish cusub oo dhex dhexmaray Immaraadka iyo Puntland & Shirkada DP World+Sawirro.
Qoraalkan waxaan uga dan leeyahay inaan baaq u diro Barbaarta . Kaftanka Siyaasadda Cabdi Good oo hadhkiisa ka caraaray iyo Cali Xaraare